सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस् कस्तो हुनुपर्दछ ? - NepaliEkta
सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस् कस्तो हुनुपर्दछ ?
3 July 20215July 2021 Nepaliekta	0 Comments
576 जनाले पढ्नु भयो ।
सामाजिक सञ्जालमा तपाईं एक सम्पादक हो र एक पत्रकार पनि हो । तपाईले के पोस्ट गर्नुहुन्छ त्यो तपाईको चिन्तन र चेतनास्तर अर्थात अर्को शब्दमा भन्ने हो भने तपाईको सिप कला र सैलीमा भर पर्छ । विचार मूलक पत्रकारिता क्षेत्रमा चिन्तनको आधारमा पत्रकार सम्पादकलाई दुई भागमा विभाजित छन् बुर्जुवा र प्रगतिशील ।
बुर्जुवा चिन्तनबाट प्रभावित सोंच बनाएका मान्छेहरुले यहि पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाको गुणगान लेखेर, आफ्नो वाल भरेका हुन्छन् तिनिहरु कसरी शोषणमुलक सत्ताको आयु लम्ब्याउन सकिन्छ हरदम प्रयत्नशिल रहने गर्दछन् । आधुनिक टेक्नोलोजी साधन श्रोत उपयोग गर्न धेरै सिपालु पनि हुन्छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा बुर्जुवा मिडियाकर्मी वा त्यसमा फेसबुक प्रयोगकर्तालाई जनविरोधी क्रान्ति बिरोधि मानिन्छ ।
अब कुरा गरौं प्रगतिशील पत्रकार वा सम्पादककोः–
एउटा प्रगतिशील सम्पादकले आफ्नो सम्पादकीयमा समय सान्दर्भिक विचार र स्तरीय शब्द छनोट गर्न सकेन भने ऊ दशकौं पछाडि पर्छ । तसर्थ तपाईले दिन शुरु भए पछि पोस्ट गर्ने स्टाटस यस्तो होस् : मानौ सयौँ पाठकहरु तपाईंको स्टाटसमा लाईक गर्न पर्खिरहेका छन्, कमेन्ट शेयर गर्न आत्तिएर बसेका छन् । यसको अर्थ हो तपाईंको दिनको पहिलो पोस्ट समय सान्दर्भिक र सनसनिपुर्ण, सत्य तथ्यमा आधारित वा रक्तरञ्जित क्रान्तिकारी विचार मुलक होस् ।
यस्तो कसरी सम्भव छ त भन्ने प्रश्नमा प्रगतिशील लेखक पत्रकार सम्पादकसँग गरिबी अन्याय अत्याचार थिचोमिचो दुःख पिडाको आफ्नै जीवनमा भोगेको देखेको अनुभव हुन्छ । त्यसैलाई कलमको हतियार बनाउने हो । बाँकि हजुरहरुले थप्दै जानेछु ।…………
← राजु रसालीको खोजी गरिदिन परिवारको आग्रह।
भेटिएकी चेलीलाई आफन्तलाई मूल प्रवाहद्धारा हस्तान्तरण →
एमसीसी सम्झौता खारेजीको प्रश्न